Gudiga horumarinta Gobolka Raascasayr oo kulamo la qaatay Shacabka Dagmooyinka Caluula , Xaabo , Murcanyo | raascasayrmedia.com
← Shariif iyo Paul Kagame oo ka wadahadlay abaaraha ka jira Somaliya.
Odayaasha Digil iyo Mirifle oo ku Baaqay in Xilka Laga Qaado Gudoomiyaha Barlamaanka Shariif Xasan →
Gudiga horumarinta Gobolka Raascasayr oo kulamo la qaatay Shacabka Dagmooyinka Caluula , Xaabo , Murcanyo
Gudiga horumarinta Gobolka Raascasayr oo mudooyinkaanba ka waday hawlo horumarineed dhamaan deegaanada gobolka ayaa waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan dagmooyinka Caluula oo ah magaalo madaxda gobolka Raascasayr Xaabo iyo Murcanyo .
Gudiga ayaa kala hadlay dadwaynaha sidi looga shaqayn lahaa horumarinta adeegyada bulshada sida kor u qaadida tayada waxbarashada , Caafimaadka .
Gudiga ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay dhisaan maamulada dagmooyinka Xaabo iyo Murcanyo oo aan horay u lahayn wax maamul ah .
Asbuuci hore ayay gudiga horumarinta gobolka Raascasayr iyo gudiga siyaasada oo isku weheliyay safaradaas ay ku soo kala bixiyeen dhamaan deegaanada gobolka ay ka dhiseen dagmada Bareeda Muumulka Dagmada .
Isku soo wada duuboo gudigaan lagu soo dhisay Shirwaynihi Beelaha Siwaaqroon ee ka dhacay Baargaal ayay aad ugu riyaaqeen dhamaan shacabwaynaha Ku dhaqan gobolka Raascasayr Sida wanaagsan ee ay u wadaan hawlaha horumarineed .
2 responses to “Gudiga horumarinta Gobolka Raascasayr oo kulamo la qaatay Shacabka Dagmooyinka Caluula , Xaabo , Murcanyo”
abdulkadir omar sagaar
waa arin aad iyo aad u wanaagsan in laga shaqeyn horumarinta bulshadda iyo kor uqaadidda awood bulshada si loo gaaro horumar waara, waana laga maarmaan in lahelo horumar lataban. in ay bulshadu ay isku tashato iyo tashato aya hayda waa arinta waajib u ah dad degan Gobolka Raascasayr waan ku faraxsanhay sida wanaagsan ee durba u hirgelay geedi socodka horumarka shacab si loogaaro barwaaqo iyo amni guud lana fah ka faa’iidaysiga kheyraad dhulka